Xildhibaan Canab Xasan “Waqti wanaagsan ayaa la soo qaatay dadkii isoo doortay” – Kalfadhi
Canab Xasan Cilmi oo ah Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa saakay ku soo laabatay magaalada Muqdisho kadib markii ay muddo dheer ku sugneed degaanada Maamulka Puntland oo ah degaan doorashadeeda.
Xildhibaan Canab waxay Baarlamaanka Soomaaliya ka soo gashaa Gobolka ay Puntland iyo Soomaaliland ay ku murunsan yihiin ee Sool waxayna mudadii ay joogtay magaalada Garowe ay qaabishay qeybaha bulshada ee Puntland gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Gobolka Sool ee Soomaaliya.
Marwo Canab dadkii ay qaabishay waxay kala hadashay dhibaatooyinka degaanka ka jira iyo sida looga gudbi karo, kadib waxay sheegtay in ay madaxda Puntland kala hadashay xal u helidda tabashooyinka jira ee dhinaca ammaanka oo ay sheegtay in walaaca ugu weyn uu ka taaganyahay.
“Waxaan qaabilay odayaasha, dhalinyarada, Haweenka iyo Siyaasiinta, waqti wanaagsan ayaa la qaatay dadkayga waxaana kawada hadalnay arimaha gobolka” , ayey Kalfadhi u sheegtay Xildhibaanad Canab Xasan Cilmi oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Dhibka Soomaaliya oo dhan ayuu ka jiraa balse annaga kayna waa ka duwan yahay, Gobolka aan ka soo jeedo waxaa isku heesta maamulada Puntland, dagaalada ugu badan ee ka dhaca waa mid iyaga u dhaxeeyo”, arimahaasi ayaa kamid ah waxyaabaha aan isla gorfeynay odayaasha degaanka”, ayey tiri Canab Xasan Cilmi.
Sidoo kale Xildhibaan Canab Xasan ayaa Kalfadhi u sheegtay in ay waqti badan gelisay sidii xal loogu heli Colaad beeleedyada waqtiyada qaar ka dhaca Gobolka Sool, taas oo ay ku dhintayn dad badan oo shacab ah.
“Odayaasha iyo aniga waxaan isku afgaranay in aan xal u raadino dagaal beeleedyo waqtiyada qaar ka dhaca gobolka iyo dilal aanooyin qabiil ah waana ka balanay”, ayey tiri Xildhibaan Canab Xasan Cilmi.
“Alle mahadiis annaga dhibka kuma qabno Al-shabaab oo gobolkayna kama jirto marka wixii kale waa arimo xal loo heli karo oo laga fariisan karo”, ayey hadalkeeda sii raacisay Xildhibaan Canab Xasan.
Waxay rajo wanaagsan ka muujisay in Maamulka Puntland oo dhawaan yeeshay hogaan cusub uu waxbadan ka qaban doono arimaha ka jira gobolka Sool oo ay sheegtay in ay la wadaagtay.
Sidoo kale Dowladda Dhexe ee Soomaaliya ayey sheegtay in ay warbixin kasiin doonto booqashadeedii Puntland iyo degaankii laga soo doortay ee Gobolka Sool. Waxay balan qaaday in wax laga qaban doono dhamaan tabashooyinkii ay u soo dhiibayn dadka degaanka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo sheegay in la xaliyey Tabashadii Baarlamaanka ee Mushaar la’aanta
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo sheegay in la xaliyey Tabashadii Baarlamaanka ee Mushaar la'aanta